Paulo Dybala Oo Ugu Danbayn Ka Hadlay Wararkii Xoganaa Ee Kooxaha Premier League La Xidhiidhinayay Maalmihii Suuqa Xagaaga Ugu Danbeeyay. - Gool24.Net
Paulo Dybala Oo Ugu Danbayn Ka Hadlay Wararkii Xoganaa Ee Kooxaha Premier League La Xidhiidhinayay Maalmihii Suuqa Xagaaga Ugu Danbeeyay.
Xidiga xulka qaranka Argentina iyo kooxda Juventus ee Paulo Dybala ayaa suuqii xagaagii la soo dhaafay si wayn loola xidhiidhinayay kooxaha Manchester United iyo Tottenham iyada oo ay xataa jireen heshiisyo ay kooxahani Juventus la gaadheen.
Paulo Dybala ayaa markii ugu horaysay si furan uga hadlay wararkii xooganaa ee Man United iyo Tottenham la xidhiidhinayay wuxuuna sheegay in ay wax aan fiicnayn tahay in lagula xidhiidhiyo goobo aanad doonayn in aad tagto.
Paulo Dybala ayaa loo diyaariyay in uu Manchester United ku biiro isla markaana ay Juventus hesho saxiixa Romelu Lukaku laakiin iyada oo wax walba ay labada kooxood isla gaadheen, ayuu Paulo Dybala iska diiday in uu Man United ku biiro.
Dhinaca kale Tottenham ayaa dadaal badan ku bixisay in ay Paulo Dybala keento London wuxuuna xidiga reer Argentina iska diiday in uu aqbalo dalabkii ay Juventus ku doonaysay in ay xidigan iska iibiso.
Paulo Dybala oo ka hadlaya diidmadii uu Man United iyo Tottenham ugu biiri waayay suuqii xagaaga ayaa yidhi: “Muu ahayn xagaa sahlan. In aad maqasho magacaaga oo koox kastaba lala xidhiidhinayo iyo goob kastaba halkaas oo aanad doonayn in aad tagto ma aha wax fiican”.
“Laakiin tani waa kubbada cagta, xataa ka hor intii uu suuqu furnaa waxaan sheegay, waxaan doonayaa in aan halkan joogo” ayuu Paulo Dybala hadalkiisa raaciyay.
Paulo Dybala ayaa ku dooday in ay muhiim ahayd in uu ogolaaday in garoonku uu markaati ka noqdo waxa uu qaban karo wuxuuna yidhi: “Waxaan filayaa in ay in badan muhiim ahayd in loo ogaado in uu garoonku hado, xataa ilaa maalintii ugu danbaysay hal qofna muu ogayn waxa dhici karayay”.
“Waxaan doonayay in aan sii joogo, waxaan doonayay in aan halkan ku sii ciyaaro oo aan waayahayga ciyaareed ka sii wato Juventus. Waxaan filayaa in aan awoodo in aan wax badan bixin karo, wax yar oo ka mid ah waxaan muujiyay kulankii Inter”.
Paulo Dybala ayaa kulankii Inter Milan goolkii furitaanka ka dhaliyay wuxuuna Sarri ku qasbaa in uu badalo aragtidii uu markii hore ka aaminsanaa.